Lakme Synopsis - Sheekada Gabdhaha 3 'Opera Opera'
Leo Delibes '3 Act Opera
Wuxuu ka kooban yahay 1881 wuxuuna mudanaa laba sano ka dib 14-kii Abriil, 1883, oo ku yaala Opéra Comique, Paris, Leo Delibes 'Opera Lakme wuxuu ahaa guul weyn.
Delibes ' Lakme waxay dhacdaa dhammaadkii qarnigii 19aad ee Hindiya. Sababtoo ah xukunka Ingiriiska, Hindi badani waxay ku dhaqmeen Hinduuga qarsoodi ah.
Ku dhaqso aniga
Nilakantha, oo ah wadaadka sare ee macbudka Brahmin, ayaa ka careysnaa in uu ka mamnuucay in uu ku dhaqmo diintiisa ciidankiisa Britishka ee magaalada.
Si qarsoodi ah, koox Hindis ahi waxay u sii socotaa macbudka si ay u caabudaan, Nilakantha waxay la kulmaan iyaga si ay ugu hoggaamiyaan salaadda. Dhanka kale, gabadhiisa, Lakme, waxay joogtaa addoonkeeda, Mallika. Lakme iyo Mallika waxay u socdaan wabiga si ay u soo ururiyaan ubaxyo iyo qubeysasho. Waxay ka soo bixiyaan alaabadooda (iyagoo u heesaya ubaxa caanka ah ee Flower Duet ) iyaga oo ku dhejinaya kursiga u dhow ka hor intaanan gelin biyaha. Laba askari oo Ingiriis ah, Frederic iyo Gerald, waxay ku jiraan barwaaqo leh laba dumar British ah iyo xukunkooda. Kooxda yaryar waxay istaagaan beerta ubaxa ee agagaarka macbudka iyo gabdhaha waxay ku yaalliin dharka quruxda badan ee kursiga keydka. Waxay aad u riyaaqeen qurxinta quruxda badan, waxay dalbadaan nuqullada naqshadaynta dahabka, Gerald wuxuu ku raacsan yahay inuu ka dhigo sawirada. Kooxda yaryar ayaa sii wadi doonta inay ku socdaan waddada beerta halka Gerald uu ka danbeeyo inuu dhammeeyo sawirka. Sida Gerald uu si xushmad leh u dhameeyo sawiradiisa, Lakme iyo Mallika.
La bilaabay, Gerald wuxuu ku dhuumanayaa baadiyaha u dhow. Mallika ayaa ka baxda iyo Lakme keligeeda ayaa looga tagay fikradeeda. Lakme waxay dhaqdhaqaaq ka socotaa geeskeeda ilkeeda waxayna aragtaa Gerald. Daacadnimo, Lakme waxay u qaylineysaa caawimaad. Si kastaba ha noqotee, markii Gerald la kulanto wejigeeda wejigeeda, si dhakhso ah ayay u soo jiitaan.
Marka caawimaadku yimaado, Lakme wuu diraa. Waxay rajeyneysaa in ay wax badan ka ogaato arintaan Ingiriiska ah. Kalidii isaga mar kale, waxay fahmaysaa nacasnimadeeda waxayna u sheegtaa inuu baxo iyo in la illoobo in uu waligeed arkay. Gerald waa mid aad u qurux badan iyada quruxdeeda si ay u dhegeystaan ​​digniinteeda, sidaas darteed wuxuu diidaa amarradiisa iyada oo sii socota inuu sii joogo. Marka Nilakantha ogaado in askari British ah uu ku xadgudbay oo nijaasoobay Macbadka Brahmin, wuxuu ku dhaartaa aargoosi.
Munaasabadda si ay u soo saaraan qulqulka aan la aqoon, Nilakantha Force Lakme si ay u heesaan " Bell Song " ee dhexda ka ah suuqa kala iibsiga. Lakme waxay rajeyneysaa in Gerald uu taladeeda qaatay. Iyadoo ay u heesi doonto aria soo jiidasho leh, Gerald wuxuu ku dhegeysanayaa codkeeda, wuxuuna u dhowyahay iyada. Lakme dareenkiisa muuqaalkiisa iyo Gerald waxaa lagu xiray Nilakantha. Si kastaba ha noqotee, Gerald waa wax yar oo dhaawac ah. Dhibaatooyinka dadka tuulada ah, dadka Niilakantha ee addoonta ah, Hadji, waxay ka caawisaa Gerald iyo Lakme inay ka baxsadaan meel qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo ku dhex yaal qalbiga kaynta. Kalkaalisada caafimaadka ee Lakme ee Gardellah ayaa caawisa si buuxda u soo kabashada.
Meelaha kaynta dhexdeeda, Lakme iyo Gerald waxay maqlaan heesaha. Gerald waa la cabsanayaa, laakiin Lakme wuu qoslaa waana uu ka badbaaday ammaankooda.
Waxay u sheegeysaa in heesayaasha ay yihiin koox ka mid ah dadka jecel in ay raadsadaan biyaha guga qadiimiga ah. Markii ay cabbeen, biyaha waxay siiyaan nolosha jacaylka weligeed ah ee labada qof. Lakme ayaa si qoto dheer ugu jacay jacaylka Gerald, waxayna u sheegtay inay ku soo laaban doonto hal galaas oo biyo ah. Gerald gaajooday, ujoogay intii u dhaxaysay dalkiisa ama jacaylkiisa. Lakme, jacaylka-ku dhuftey, u boodboodaya guga suugada. Frederic waxay heshay meel u dhuumanaysa galka Gerald oo gala aqalka. Frederic wuxuu xasuusinayaa isaga iyo waajibaadkiisa iyo caleemaha. Lakme waxay ku soo noqotaa biyaha, laakiin markii Gerald uu diido inuu wax cabbo, waxay ogtahay in xajmiga uu isbedelay. Halkii ay ku noolaan lahayd nacasnimo, waxay ilmo ka soo baxaysaa geedka dara joogtada ah oo qaniinaa. Waxay u sheegtaa Gerald waxa ay samaysay oo ay biyo wada cabeen. Nilakantha waxay heleysaa aqalkooda waxayna galaan sida Lakme dhimanayso.
Waxay u sheegtay aabbaheed inay iyadu iyo Gerald cabbeen guga qalliinka. Isla markiiba, way dhimataa.
Hawlgallada kale ee Macaamiisha Cilmiga ah
Donizetti waa Lucia di Lammermoor
Mozart's Flight Magic
Madxafka Madada ee Puccini
Leporello's "Catalog Aria" oo ka soo jeeda Mozart ee orodyahanka Don Giovanni
Don Carlo Cilmi-baaris
Astaameynta Der Rosenkavalier
Guillaume Tell (William Tell) Sawiris
Saddexda Tenan: Pavarotti, Domingo, iyo Carreras
Muujinta Opera Verdi, Yeruusaalem
Hansel iyo Gretel Opera Synopsis
Don Pasquale Qoraaga
Habka loo yaqaan 'René Fleming'
Mawduuca Abriil, Hawlaha Ciidda, iyo Dhacdooyinka Ardayda Dugsiga Hoose
Boqoradda Min ee Joseon Korea
20 Su'aalaha Waraysiga ee OCI
Baro erayada "La Fleur Que Tu M'avais Jetee" Laga soo bilaabo "Carmen"
Abaalmarinta Sanadka Cusub
Jaamacadda Asbury University GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Farqiga u dhexeeya Flair iyo Flare
Waa maxay Evo Devo?
Tilmaamaha Habboon ee Sawirrada
10-Noocyada Ugu Dheer ee Banned Classic
Rabshadaha Lammas Sabbat
Sidee Raafka Raafaaxa Wuxuu Bogsiiyey Buugaagta Kitaabka ee Tobit?
Shuruudaha Xulashada Iskuulka Sharci
Kristen Wiig 'Sannadka' SNL 'ugu fiican
Albert Herring Cilmi-baaris
Cabbiridda Qorshaha Daaruska Saxarada Tateonics
Aqoonsiga Dugsiyada ee Farmingdale State
Xeerka 29: Threesomes iyo Foursomes (Xeerarka Golf)
Top 10 Musharaxiinta ugu Wanaagsan ee Wadanka ee Wakhtiga oo dhan
Sawirada carruurta Sawirada Baabuurta, Gawaarida, iyo Diggers
Taariikhda Sonkorowga: Sidee Insulin Ku Dhaca Inta La Helay
Qeexida Atheistic, cibaadada
Noqo Yeelasho - Ciyaar Dhammaan Barayaasha Dadka waaweyn
Yoohoo! Masraxa Warm-ka
Maxaad Sameyneysaa Fanka?